Ikrisimesi: Iindaba, Iingcebiso, Izimvo Kunye Nenkuthazo | December 2021
I-83 Elf ehlekisayo kwiiShelf Iingcamango ezilula zokuphinda zibuyele ekhaya - 2020
I-Elf eshelufini sisithethe seKrisimesi kunye nosapho oluthandayo kunye ne-toy scout elves ebekwe ekhaya ngoDisemba. Fumana ukhuthazo ngezi zimvo ze-elf.
Iingcebiso ngePoinsettia yoKhathalelo: Imigaqo yegolide eli-13 yesityalo sePoinsettia
I-Poinsettia: Iingcebiso zengcali malunga nokunyamekela isityalo sakho se-poinsettia kunye nokwandisa ixesha lokuphila. Eyaziwa njengeeNkwenkwezi zeKrisimesi, iPoinsettia sisityalo esisisiseko seKrisimesi ekhaya.
Ungawuhombisa njani uMthi weKrisimesi njengoGcisa
Fumana indlela yokuhombisa umthi weKrisimesi (wokwenyani okanye owenziweyo) ngobungcali kunye neengcebiso zokuhombisa kwiBhalsam Hill kunye nokuhonjiswa kwemithi yeKrisimesi.
Yenza Iikhrismesi Zakho Zekrisimesi-Uyenza Njani I-Crackers Yakho
Ngaba udikwe ngabathengisi beKrisimesi abathengwa ezivenkileni? Thatha ubugcisa beKrisimesi ngokuziqhelanisa nabakhangeli bakho beKrisimesi. Ingcamango efanelekileyo yokuhlobisa iKrisimesi.
Iindlela ezi-7 zomthi weKrisimesi eziHambisayo ngo-2020
Njengombindi wayo yonke imihombiso, eyona miqobo mikhulu yemithi yeKrisimesi ka-2020 ibandakanya imithi yeKrisimesi yangaphandle, izibane zemithi enemibala emininzi kunye nemithi ephumayo.
Ubeka Nini uKrisimesi wakho woMthi weKrisimesi usonjululwe
Nini ukubeka umthi weKrisimesi UK: Amabhithi kunokwenzeka ukuba abeke umthi wabo weKrisimesi kunye nemihombiso yeKrisimesi kwiveki yesibini kaDisemba.
Ukunyamekela Umthi weKrisimesi oPotyiweyo-Pot Pot Imithi yeKrisimesi ekhulileyo
Umbiza okhule umthi weKrisimesi: Iingcebiso zokhathalelo lomthi weKrisimesi owenziwe ngodongwe okanye uhlala, imithi yokwenene yeKrisimesi ezimbizeni, kunye neengcebiso malunga nokutyala egadini yakho emva kweKrisimesi.
Nini Ukuthatha Umthi weKrisimesi ezantsi kunye nokuhombisa: Ngobusuku beshumi elinesibini
Uya kuwuthatha nini umthi weKrisimesi? Ubusuku beshumi elinesibini buwela ngomhla we-5 okanye wesi-6 kuJanuwari kodwa imihla ixhomekeke kwisithethe. Funda ngokuhlwa kweshumi elinesibini kunye ne-Epiphany.
Eyona mithi mihle yokuThengwa kweKrisimesi eyi-7ft
Umthi weKrisimesi owenziweyo, okhanyiswe kwangaphambili ngumhombiso ongenangxolo esinokuthi siwushiye ngasemva. Thenga eyona mithi yeKrisimesi ilungele ukukhanya eyi-7ft ukusuka kubathengisi bezitalato eziphezulu, kubandakanya iMark & ​​Spencer, uJohn Lewis kunye noArgos.
Izibane zeKrisimesi zangaphandle -Izibane ezingama-23 zangaphandle zeKrisimesi zokuThenga
Jonga ezona zibane zangaphandle zeKrisimesi ezingaphandle kwekhaya lakho nangaphandle kwendawo, kubandakanya iiprojektha ezikhanyayo, izibane zelaser, izibane ze-LED kunye nokunye.
Kutheni Sinayo Imithi yeKrisimesi? Imbali yoMthi weKrisimesi
Sihombisa imithi yeKrisimesi ekhaya ngoDisemba, kodwa kutheni le nto sinemithi yeKrisimesi kwaye isithethe sivela phi? Funda imbali yomthi weKrisimesi.
Ukuhonjiswa kukaJohn Lewis kweKrisimesi 2020 - Iindlela ezi-7 zohambo lweXmas
UJohn Lewis utyhila imixholo yayo yokuhombisa iKrisimesi yowama-2020, enemithi esixhenxe eyahlukileyo yeKrisimesi ejonge ukukhuthaza abathengi ukuba bahombise ixesha leholide.
IKrisimesi yeBhalsam Hill 'Flip Tree' iza kunye ngemizuzu
Intsingiselo entsha yeBhalsam Hill kumavili konga ixesha kunye namandla njengoko ijijela endaweni yayo, ukunciphisa ixesha elichithwe kwindibano, ukubhabha kunye nokwenza umthi
Imithi yeKrisimesi yoMthi iya kuba yiKrisimesi enkulu kwi-2018 Trend, utshilo uJohn Lewis
UJohn Lewis ujonge ingqokelela yabo yeKrisimesi ka-2018 kwaye wabhengeza ezona zinto zibalaseleyo zokuhombisa iKrisimesi zonyaka njengomthi weKrisimesi womthi.
Imihombiso yeKrisimesi yoMnyango weKhaya lakho-iKrisimesi ka-2020
Thenga eyona nto intle yokuhombisa umnyango weKrisimesi kwaye ufumane iingcebiso ngesimbo sokubhala, ukusuka kwisithsaba somnyango weKrisimesi ukuya kwizaphetha zomnyango, ukuya kumbala ongaphambili womnyango.
Iimpawu ezigqwesileyo zeKrisimesi
Nokuba kungasemnyango wangaphambili, eludongeni kwiphaseji yakho, okanye njengendawo ephambili etafileni yakho, isithsaba seKrisimesi yeyona nto ifanelekileyo yokuhombisa ikhaya lakho.
Umthi ogqwesileyo oPhezulu woMthi weKrisimesi wokuthenga
Kulula ukuseta, imithi yeKrisimesi evelayo sisisombululo sokuhombisa ngaphandle kwamakhaya ahlwempuzekileyo afuna umthi weKrisimesi ongaphantsi.
Iingcamango zamakhadi eKrisimesi ezenziwe ngezandla - Amakhadi eKrisimesi azenzele
Phefumlelwa ngokukhethwa kwethu kweekhadi zeKrisimesi ezenziwe ngezandla kwiPinterest. Yenza amakhadi akho eKrisimesi e-DIY usebenzisa le mibono mikhulu.
Ukuhonjiswa kweHolo yeKrisimesi-Ukuhombisa iHoloyi ngeKrisimesi
Iindledlana zeHallways, ezihlala zixakekile ezindleleni, zibalulekile iindawo zokuhombisa ekhaya-kwaye ngeKrisimesi, ingqalelo ijike ekudaleni ulwamkelo olufudumeleyo nolwamkelayo.
Imithi yeKrisimesi yangaphandle ye-19 yegadi yakho, umnyango wangaphambili, ivaranda
Thenga owona mthi weKrisimesi ungaphandle ekhayeni lakho, nokuba ngowesitiya sakho, umnyango wangaphambili okanye iveranda. Bona ukhetho lwethu lweendlela zesiko kunye nezinye.
umfanekiso wekhitshi elincinci
Iimuvi ezingama-20 eziphezulu zeHalloween
izimvo zokuhlaziya igumbi lokuhlala